Dowladda Nigeria oo xayiraaddii ka qaadday Shabakadda Twitter-ka | Arrimaha Bulshada
Home News Dowladda Nigeria oo xayiraaddii ka qaadday Shabakadda Twitter-ka
Dowladda Nigeria oo xayiraaddii ka qaadday Shabakadda Twitter-ka
Friday, January 14, 2022 News
Bulsha:- Dowladda Nigeria ayaa qaadday xayiraaddii saarneyd barta Twitter-ka, toddoba bilood kadib markii in ka badan 200 oo milyan oo qof oo dalkaas ku nool laga xiray shabakaddan bulshada.
Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa amar ku bixiyay in shaqada Twitter-ka ay dib uga bilaaban doonaan dalka Khamiista maanta, sida uu sheegay agaasimaha guud ee Wakaaladda Horumarinta Tignoolajiyada Qaranka Kashifu Inuwa Abdullahi.
Waxay uu sheegay in taasi ay ka dambeysay markii Twitter-ku ay oggolaatay inay buuxiso shuruudo ay ka mid yihiin inay xafiis ka furtaan Nigeria.
Nigeria ayaa dalkeeda ka mamnuucday Twitter-ka 4-tii Juun ee sanadkii hore, iyadoo tixraacaysa waxa ay ugu yeertay "Isticmaalka joogtada ah ee waxqabadyada masraxa awoodda u leh inay wiiqaan jiritaanka shirkadaha Nigeria."
Mamnuucista Twitter ee waddanka Nigeria ayaa waxaa ka dhashay dhaleeceyn loo jeediyay dowladda, maadaama ay timid wax yar ka dib markii shabakada Twitter-ka ay tirtirtay qoraal uu madaxweyne Buhari soo dhigay, kaas oo uu ugu hanjabay in uu kula dhaqmi doono gooni-goosadka Nigeria "Luqadda ay fahmi doonaan."
Kashifu Abdullahi wuxuu sidoo kale sheegay in Twitter ay oggolaatay shuruudo kale oo ay ka mid yihiin magacaabista wakiilka Twitter ee Nigeria, u hoggaansanaanta waajibaadka canshuuraha iyo ku dhaqankooda "iyadoo si xushmad leh loo aqoonsanayo sharciyada Nigeria, hiddaha, dhaqanka iyo taariikhda qaranka, kaas oo sharcigan la dhisay.”
Afhayeenka Twitter weli wax war ah kama soo saarin warbixinta dowladda Nigeria.